Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Brussels Airlines waxay soo bandhigtay aqoonsi cusub
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Brussels Airlines waxay soo bandhigtay aqoonsi cusub.
Brussels Airlines waxay diiradda saartaa qaaradda Afrika waxayna xaqiijisaa booskeeda suuqa iyada oo leh calaamad cusub.
Brussels Airlines waxay dardargelisay oo ay xoojisay 2020 qorshaheeda isbeddelka Reboot Plus, si loogu gogol xaaro shirkad aan mustaqbalka lahayn oo awood u leh inay wajahdo tartanka, oo leh qaab-dhismeed kharash caafimaad leh.
Dib-u-habaynta ka dib, shirkaddu waxay bilawday wajigii labaad ee qorshaheeda Reboot Plus: marxaladda dhisidda iyo hagaajinta.
Shirkadda Belgian waxay isu beddeshaa inay noqoto diyaarad caafimaad leh, faa'iido leh oo siisa aragtiyo macaamiisheeda, la-hawlgalayaasheeda iyo shaqaalaheeda.
Maanta, Brussels Airlines waxay soo bandhigaysaa aqoonsi sumad cusub, taasoo xaqiijinaysa booskeeda suuqa sida xamuulka guriga Belgium iyo khabiirka Afrika ee Kooxda Lufthansa.
Midabada la cusboonaysiiyay, summada cusub iyo beeralayda diyaaraduhu waa astaanta muuqaalka ee cutubka cusub ee shirkadda, oo sheegaysa diyaargarowgeeda caqabadaha mustaqbalka iyo xoojinta muhiimada astaanta Belgian. Cutub si xooggan diiradda u saaraya waayo-aragnimada macmiilka, isku halaynta iyo waaridda iyadoo la ilaalinayo qaab-dhismeed kharash-ku-tartami ah.
Iyadoo ay sabab u tahay dhibaatada COVID-19, Diyaaradda Brussels la dardargeliyay lana xoojiyey sanadka 2020 qorshaheeda isbadalka Reboot Plus, si loogu gogol xaaro shirkad mustaqbal oo aan awood u lahayn inay wajahdo tartanka, oo leh qaab dhismeed qiima leh oo caafimaad qaba.
Gudoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB), Cuthbert Ncube, waxa uu soo dhawaynayaa tallaabadan ay qaaday shirkadda diyaaradaha ee Brussels, maadaama ay ku soo beegantay hammigii ATB ee ahaa in ay Afrika hal meel u noqoto iyada oo la kordhinayo fursadaha safarka iyo dalxiiska.
Dib-u-habaynta ka dib, shirkaddu waxay bilawday wajigii labaad ee qorshaheeda Reboot Plus: marxaladda dhisidda iyo hagaajinta. Diyaaradda Brussels hadda waxay u jeesatay mustaqbalka iyada oo la adeegsanayo maalgelin istaraatiijiyadeed oo ku aaddan waayo-aragnimada macaamiisha oo la wanaajiyey, tignoolajiyada cusub, digitization, hababka cusub ee shaqada, iyo horumarinta shaqaalaheeda.
Shirkadda Belgian waxay u beddeleysaa inay noqoto diyaarad caafimaad leh, faa'iido leh oo siisa macaamiisheeda, la-hawlgalayaasheeda iyo shaqaalaheeda; diyaarad si joogto ah diiradda u saaraysa deegaanka iyo dhimista raadkeeda deegaanka. Diyaarad cusub oo Brussels ah.
"Waxaan rabnaa inaan si cad u calaamadeyno bilowga cusub Diyaaradda Brussels. Macaamiishayada, kuwaas oo u qalma waxa ugu wanaagsan, laakiin sidoo kale shaqaalaheena, kuwaas oo ay ka go'an tahay isbeddelka aan horay u wadno oo ay maalin kasta wax ku biiriyaan. Taasi waa sababta aan maanta u soo bandhigno tarjumaada muuqaalka ee bilawga cusub. Aqoonsigan cusub, waxaanu diyaar u nahay inaanu tusno macaamiisheena, shaqaalahayaga, la-hawlgalayaashayada iyo dhammaan dadka kale ee ay khusayso inaan bog ka furayno. Anagoo ah mid ka mid ah afarta shirkadood ee Lufthansa Group, waxaanu dhisaynaa jidka mustaqbal rajo leh. Waxaan u aragnaa astaantan cusub inay calaamad u tahay kalsoonida shirkadeena - dib-u-xoojinta aqoonsigayaga sida dal-guri Belgium." - Peter Gerber, madaxa fulinta Diyaaradda Brussels.